UBarbara Walters Ubomi: I-Television Journalist
Umlobi weNewunethi kunye neMpi
Yaziwa ngokuba: ngowokuqala umfazi (co-
Umsebenzi: intatheli, umboniso womboniso kunye nomvelisi
Imihla: Septemba 25, 1931 -
Ubaba kaBarbara Walters, uLou Walters, wayelahlekelwe yintsimi yakhe kwiNkxwaleko, waza waba ngumnikazi wekota yeLatini, kunye neeklasi zasebusuku eNew York, eBoston naseFlorida. UBarbara Walters waya esikolweni kulawo mazwe amathathu. Unina wayenguDena Selett Waters, kwaye wayenodade omnye, uJacqueline, owayekhubazekile (d.
Ngo-1954, uBarbara Walters waphumelela kwiSchool Law College, nge-degree kwisiNgesi. Wasebenza ngokufutshane kwi-arhente ye-ad, waza waya emsebenzini kwi-TV ye-ABC-esebenzayo. Wasuka apho ukuba asebenze kunye nenethiwekhi ye-CBS kwaye ngo-1961, kwi-NBC's Today ibonisa.
Xa namhlanje uhambelana noFrank McGee wafa ngo-1974, uBarbara Walters wabizwa ngokuba ngu-Hugh Downs.
Kwakhona ngo-1974, uBarbara Walters wayephethe umboniso wexesha elifutshane lobudlelwane, kungekhona kwabesifazane kuphela.
I-ABC Evening News Co-Anchor
Kwiminyaka emibili kamva, uBarbara Walters waba yintetho yelizwe ngokwakhe, xa i-ABC isayina kuye kwiminyaka emi-5, i-R1 million yezivumelwano ngonyaka, ukubambisana kunye neengxelo ezine zonyaka. Waba, ngomsebenzi lo, umfazi wokuqala ukudibanisa inkqubo yeendaba zexesha langokuhlwa.
Umncedisi wakhe, uHarry Reasoner, wenza ngokucacileyo esidlangalaleni ukungaxhamli kwakhe kunye nale nxaxheba. Eli lungiselelo alizange liphuculise amanqaku e-ABC angamahlwempu, kodwa ngo-1978, uBarbara Walters wehla, ejoyina iindaba ezibonisa i- 20/20 .
Ngowe-1984, kwi-replay emangalisayo yembali, waba ngumlingani we- 20/20 kunye noHugh Downs. Umboniso wanda kwaze kwaba nobusuku bobusuku ngeveki, kwaye ngexa elinye uBarbara Walters kunye noDiane Sawyer babamba iqela elinye leentsuku.
Waqhubeka noBarbara Walters Specials , owaqala ngowe-1976 ngumboniso onokudliwano-ndlebe noMongameli uJimmy Carter kunye noMninimzi woBukumkani uRoyalynn Carter kunye noBarra Streisand.
UBarbara Walters wenza ukuba kuninzi ukuthetha inyaniso kunezifundo ezilindeleke. Ezinye izidliwano-ndlebe ezidumileyo zeemiboniso zakhe ziye zabandakanya, ngokubambisana, u-Anwar Sadat waseYiputa kunye neMenachem Begin of Israel ngo-1977, kunye noFidel Castro, i-Princess Diana, uChristopher Reeves, uRobin Givens, uMonica Lewinsky kunye noColin Powell.
Ngowe-1982 no-1983, uBarbara Walters wanqoba ama-Emmy amabhaso ngo-interview. Phakathi kwamanye amaninzi amabhaso, waxoshwa kwi-Academy yezoThutho zoBonwakude kunye neSayensi yeHlabathi yoLwazi ngo-1990.
Ngo-1997, uBarbara Walters wadala kunye noBill Geddie umboniso weentetho zentsuku, I-View . Wabambisana kunye neGeddie kwaye wabambisana kunye nabanye abafazi abane beeminyaka ezahlukeneyo kunye neembono.
Ngo-2004, uBarbara Walters wehla kwiindawo zakhe eziqhelekileyo ngo- 20/20 . Washicilela yakhe imbali, Uphicotho-mbuzo: Isimemo , ngo-2008. Wayenomsebenzi ovulekileyo wenhliziyo ngo-2010 ukulungisa intsimbi yeentliziyo.
UWalters washiya umhlala-phantsi evela kwiThe View njengomncedisi-cosi ngo-2014, nangona ngokuphindaphindiweyo ebuya njengomninimzi-mneneli weendwendwe.
UBarbara Walters watshata kathathu: URobert Henry Katz (1955-58), uLee Guber (1963-1976), noMerv Adelson (1986-1992). Yena noLee Guber bamkela intombi ngo-1968, ogama linguJacqueline Dena emva koodade nomama kaWalters.
Kwakhona wayedlanise okanye wayenxulumene ngokuthandana no-Alan Greenspan (USihlalo we-US Federal Reserve) kunye noSenathen John Warner.
Ngomxholo wakhe we-2008, wabalisela intsebenzo ye-1970 kunye noSenator wase-US u-Edward Brooke, kwaye bephelile loo nto ukuze baphephe ukuhlaselwa.
Ugxekwa ngenxa yobuhlobo kunye noRoger Ailes, uHenry Kissinger noRoy Cohn.
Iingcaphuno zabaBhinqa beMbali
20 Iintlobo zeentlanzi ezihlala kunye kunye nePuget Sound
Umehluko phakathi kwabaFarisi nabaSadusi eBhayibhileni
Uhlalutyo lwe "Iphepha Lomtsalane" ngoCharlotte Perkins Gilman
Carnoustie, iScottish Golf Links kwiRota evulekileyo
Kutheni i-Groundhog yabona i-Shadow yayo?
Ukukhutshwa kwesiGxina soLanduva kudala abafundi abazimeleyo
Imfazwe Yehlabathi I: Iingqinisiso Ezilishumi elinesine
Dipthongs: I-Voliding Vowels
Iindlela ezili-10 zokulungiselela iSityhilelo soBuntu
Iifrikanti zamaKhristu zamaCher